Nei Uchifanira Kuisa Muzvigadzirwa Mavhidhiyo pane Yako Ecommerce Saiti | Martech Zone
Chigadzirwa mavhidhiyo anopa e-vatengesi nzira yekugadzira yekuratidza zvigadzirwa zvavo uye zvakare ichitendera vatengi mukana wekutarisa zvigadzirwa muchiito. Pakazosvika 2021, zvinofungidzirwa kuti 82% yeese internet traffic ichagadzirwa nekushandisa vhidhiyo. Imwe nzira eCommerce mabhizinesi anokwanisa kuenda pamberi peizvi nekugadzira chigadzirwa mavhidhiyo.
Statistics iyo Inokurudzira Chigadzirwa Mavhidhiyo eiyo Yako Ecommerce Saiti:
88% yevaridzi vebhizinesi vakataura kuti zvigadzirwa zvemavhidhiyo zvakawedzera huwandu hwekutendeuka
Zvigadzirwa zvemavhidhiyo zvakagadzira 69% muavhareji size size
81% imwe nguva inopedzerwa pane nzvimbo kune vhidhiyo yekuona
Chigadzirwa mavhidhiyo akaburitsa 127% kuwedzera mukushanya kwemapeji kwaive navo
Izvi infographic, Nei Uchifanira Kuisa Mune Chigadzirwa Mavhidhiyo Nhasi, inotsanangura zvakanakira zvigadzirwa zvemavhidhiyo kune vatengesi vepamhepo uye inopa matipi gumi epamusoro ayo achakutungamira nenzira yekugadzira vhidhiyo yechigadzirwa:
Ronga zano rako yekugadzira, kusimudzira, uye kuyera kukanganisa kweako mavhidhiyo echigadzirwa.
Tanga zvishoma nekugadzira sarudzo yemavhidhiyo yako zvigadzirwa zvinotengwa zvakanyanya.
Chengeta mavhidhiyo ako nyore kuwedzera kukwidza kune vateereri vakasiyana-siyana.
Chengeta mavhidhiyo ako pfupi uye kusvika pacho.
Gadzirisa mapeji ako kuitira kuti mavhidhiyo atambe pauri mafoni efoni.
Ratidza iyo chigadzirwa chiri kushandiswa kupa pfungwa iri nani yekubata uye kunzwa kwechinhu.
Gadziridza ako mavhidhiyo ekutsikisa natively pa magariro enhau.
Sanganisira a kudana kuzviito kukurudzira muoni kutenga.
Shandisa vhidhiyo zvinyorwa kana ma subtitles ekuona kana ruzha rwakaremara.
Kurudzira user-generated content kubva kune vatengi chaivo vakatenga chigadzirwa.
Ive neshuwa yekuverenga yedu imwe chinyorwa uye infographic pane iyo mhando dzechigadzirwa mavhidhiyo unogona kubereka. Heano akazara infographic:
Tags: anotengesa zvakanyanya mavhidhiyo echigadzirwakudana kuzviitoecommerce chigadzirwa mavhidhiyoecommerce mavhidhiyoinfographicnhare yechigadzirwa mavhidhiyochigadzirwa chimwechigadzirwa vhidhiyo kurebachigadzirwa vhidhiyo zanochigadzirwa mavhidhiyopasocial media chigadzirwa mavhidhiyougc mavhidhiyomushandisi akagadzira zvemukatiVhidhiyo Captionsmavhidhiyo emusoromavhidhiyo